Dowladda Turkiga oo ballan qaaday inay sii wadeyso Taageerida Somalia – idalenews.com
Dowladda Turkiga oo ballan qaaday inay sii wadeyso Taageerida Somalia
Dowladda Turkiga ayaa mar kale Ballan qaaday inay sii wadayaan Taageerada ay siiyaan Ummadda Soomaaliyeed, kadib markii Is qarxiyayaal dhawaan Qaraxyo la beegsadeen, Maxkamadda Gobolka Banaadir iyo Kolonyo Gawaari ah oo ay la haayeen Ururka Bisha Cas (Kizilay) ee Turkiga iyo Ciiddamadda AMISOM.
Haddal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa lagu Cambaareeyay Weeraradii maalintii Axada ka dhacay qeybo ka mid ah Magaaladda Muqdisho, waxayna Dowladda Turkiga sheegtay inay Tiiraanyada la qeybsaneyso Ehelada dadkii ku geeriyooday ama ku dhawacmay Qaraxyadaas.
Dhinaca kale, Ku-xigeenka Ra’isul Wasaaraha Turkiga Bekir Bozdag, ayaa sheegay in Shaqaalihii Samafalka Turkiga ee ku dhawacmay Qaraxyadii uu Caafimaadkooda soo hagaagaayo.
Bekir Bozdag, waxa uu intaa ku daray inay Tacsi u dirayaan Eheladii dadkii ku geeriyooday Qaraxyadda.
Ra’isul wasaaraha Turkiga Rajab Dayib Urdugan, ayaa isagana qadka wada shekeysiga ee Video Conference kula hadlay Shaqaalaha Samafalka Turkiga ee ka hawlgala Muqdisho, wax yar kadib qaraxyadii Maleeshiyadda Alshabaab ka geysteen Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Turkiga ayaa waxa ay safka hore kaga jirtaa Dowladaha Deeqaha dhaqaale iyo Hawlaha Samafalka ka fuliya Gudaha Somalia.
DAAWO Video: Qaraxyo lala beegsaday tartan orad ah oo ka socday Mareykanka